ESI EMEGHE FAỊLỤ XML NA WEEBỤ - ỌRỤ NTANETỊ - 2019
Mepee faịlụ XML maka nhazi ederede.
Xerox Corporation na-etinye aka na mmepụta nke ndị na-ebi akwụkwọ. N'ime ndepụta nke ngwaahịa ha, e nwere ihe nlereanya Phaser 3117. Onye ọ bụla nwere ngwá ọrụ dị otú ahụ tupu ịmalite ọrụ ga-achọ ịwụnye ngwanrọ maka ngwaọrụ iji hụ na arụ ọrụ dị mma na OS. Ka anyị lebakwuo anya na nhọrọ nile maka otu esi eme nke a.
Kwado ndị ọkwọ ụgbọala maka mbipụta Xerox Phaser 3117
Nke mbụ, ọ kachasị mma iji chọpụta ozugbo usoro ahụ. Iji mee nke a, naanị ị ga-achọ ịmara onwe gị na ntụziaka dị n'okpuru, họrọ otu ma soro nzọụkwụ ọ bụla.
Usoro 1: Xerox Web Resource
Dịka ndị niile na-emepụta ngwá ọrụ dị iche iche, Xerox nwere ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nwere ibe nkwado, ebe ndị ọrụ nwere ike ịchọta ihe niile ga-aba uru mgbe ha na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ a. Chọọnụ ma budata ọkwọ ụgbọala na nhọrọ a dị ka ndị a:
Gaa na weebụsaịtị Xerox ukara
Tụgharịa ihe nchọgharị kachasị amasị gị ma gaa na isi peeji nke saịtị ahụ site na iji njikọ dị n'elu.
Kwuo ihe "Nkwado na ndị ọkwọ ụgbọala"iji gosipụta menu nchịkọta nhọrọ ebe ịchọrọ ịpị "Akwụkwọ na Ọkwọ ụgbọala".
Nzọụkwụ ọzọ bụ ịtụgharị gaa na nsụgharị mba nke saịtị, nke a na-eme site na ịpị aka na njikọ kwesịrị ekwesị.
Ndị mmepe na-enye ịhọrọ ngwá ọrụ site na listi ma ọ bụ tinye aha ngwaahịa ahụ na akara. Nhọrọ nke abụọ ga-adị mfe na ngwa ngwa, ya mere na-ebipụta akwụkwọ nbipụta ebe ahụ ma chere ka ozi ọhụrụ ahụ pụta na tebụl n'okpuru.
Ihe nbipute achọrọ ga-apụta, ebe ị nwere ike ịga ozugbo na ngalaba ọkwọ ụgbọala site na ịpị bọtịnụ ahụ. "Ndị ọkwọ ụgbọala & Downloads".
Na mepee taabụ, buru ụzọ mee sistemụ arụ ọrụ ị na-eji, dịka ọmụmaatụ, Windows XP, ma deekwa asụsụ nke ị ga-eji arụ ọrụ nke ọma.
Ugbu a, ọ bụ naanị ka ịchọta eriri na onye ọkwọ ụgbọala ma pịa ya iji malite usoro ntinye.
Mgbe nbudata ahụ zuru oke, gbakwunye installer na soro ntuziaka ndị edere na ya. Ihe nrụnye n'onwe ya ga-agba ọsọ na-akpaghị aka.
Ọ bụrụ na enweghị ọchịchọ ịchọta onwe gị maka ndị ọkwọ ụgbọala kwesịrị ekwesị, nyefee ha niile na mmemme pụrụ iche. Ị ga-achọ - ibudata otu n'ime ha, tinye na kọmputa gị, meghee ma gbanye ihe nṅomi ka ọ wee bulie faịlụ ọhụrụ. Mgbe nke ahụ gasịrị, ọ bụ iji kwado nwụnye ma chere ka ọ gwụ. Anyị na-atụ aro ka ị mara nke ọma na ndepụta nke ndị kachasị mma nke ndị dị otú ahụ na ngwanrọ na ihe ọzọ anyị nwere n'okpuru.
Anyị nwere otu isiokwu na-akọwa n'ụzọ zuru ezu usoro dum nke ịchọta na ịwụnye software site na iji DriverPack Solution. Anyị na-atụ aro ịgụ ihe a na njikọ dị n'okpuru.
Usoro 3: Chọọ site ID
A na-ekenye aha ọ bụla, gụnyere ndị na-ebi akwụkwọ, aha pụrụ iche na sistemụ arụmọrụ. N'ihi koodu a, onye ọrụ ọ bụla nwere ike ịchọta ndị ọkwọ ụgbọala kachasị mma. Aha pụrụ iche nke Xerox Phaser 3117 yiri nke a:
Enweghị ihe mgbagwoju anya na usoro nhazi a, ọ dị mkpa ka ị soro obere ntụziaka. Ị nwere ike ịhụ nke a na njikọ dị n'okpuru ebe a.
Usoro 4: Ụlọ ọrụ Windows OS
N'ezie, sistemụ arụmọrụ na-akwado ọrụ na ndị na-ebi akwụkwọ, n'ihi ya, ọ na-enye ndị ọrụ ngwọta ha maka ịchọta na ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala. Omume algorithm na Windows 7 yiri nke a:
Gaa "Malite" ma họrọ ihe "Ngwaọrụ na ndị na-ebi akwụkwọ".
Iji mee ihe bara uru, pịa "Wụnye Mbipụta".
Xerox Phaser 3117 bụ ngwaọrụ mpaghara, ya mere, na window nke meghere, họrọ nhọrọ kwesịrị ekwesị.
Tinye njikọ na ọdụ ụgbọ mmiri ahụ, wee kọwaa njikọ na-arụ ọrụ na window windo ahụ.
Windows ga-emepe ugbu a ndepụta nke ndị niile na-arụ ọrụ na ngwaahịa ha. Ọ bụrụ na ndepụta ahụ apụtaghị ma ọ bụ na e nweghị usoro achọrọ, pịa "Mmelite Windows" imelite ya.
O zuru oke ịhọrọ ụlọ ọrụ, ihe nlereanya ya ma ị nwere ike ịga n'ihu.
Omume ikpeazụ bụ ịbanye aha ahụ. Nanị tinye ụdị aha ọ bụla achọrọ maka onye nbipute iji malite wụnye ndị ọkwọ ụgbọala ahụ.
Usoro nhazi ahụ bụ akpaka, ya mere na ị gaghị arụ ọrụ ọ bụla ọzọ.
Taa, anyị elelewo nhọrọ niile dịnụ, nke ị nwere ike itinye ndị ọkwọ ụgbọala ziri ezi maka Xerox Phaser 3117. Dịka ị pụrụ ịhụ, nke a nwere ike mezuo site na usoro ọ bụla na nkeji ole na ole, ọbụlagodi onye ọrụ na-enweghị ahụmahụ nwere ike ijikwa ya.